प्रमका प्रेस सल्लाहकारको ट्विटमा गलत जानकारी, हावामा ८ घण्टा कोरोना भाइरस बाँच्दैन – MySansar
प्रमका प्रेस सल्लाहकारको ट्विटमा गलत जानकारी, हावामा ८ घण्टा कोरोना भाइरस बाँच्दैन
प्रधानमन्त्रीका प्रेस सल्लाहकार सूर्य थापाले मंगलबार साँझ ५ बजे एउटा ट्विट गरे। ‘लकडाउनपछिकाे नियमित दिनचर्या । मुखमा मास्क नटुटाउने स्वअनुशासनकाे परिपालना । जगत भलाेका लागि …!’ लेखिएको सो ट्विटमा दुई वटा फोटो थिए, एउटा- उनको आफ्नै मास्क लगाएको, अर्को- हावाबाट कोभिड १९ सर्छ, भाइरस हावामा ८ घण्टा बाँच्छ लेखिएको र सिएनबिसीको डब्ल्युएचओका अधिकारीको फोटोसहितको एउटा समाचारसहितको फोटो।
उनको यो फोटोमा रहेको जानकारी भने सही होइन, फेक हो। हामीले गरेको फ्याक्टचेकमा देखिएका तथ्य यस्ता छन्।
लकडाउनपछिकाे नियमित दिनचर्या । मुखमा मास्क नटुटाउने स्वअनुशासनकाे परिपालना । जगत भलाेका लागि …! pic.twitter.com/rVQ1suhYOH
— Surya Thapa (@ThapajiSurya) April 14, 2020
प्रधानमन्त्रीका सल्लाहकारले ट्विट गरेको सिएनबिसीको समाचार गलत होइन, सही हो। सिएनबिसीले WHO considers ‘airborne precautions’ for medical staff after study shows coronavirus can survive in air शीर्षकमा समाचार पक्कै पनि राखेकै हो। यहाँ क्लिक गरी हेर्न सकिन्छ।
1 thought on “प्रमका प्रेस सल्लाहकारको ट्विटमा गलत जानकारी, हावामा ८ घण्टा कोरोना भाइरस बाँच्दैन”
Thank you very much for your effort to give us correct information ??